हटलाईन सडकमा ठेकेदारको अचेक्लीः उच्च जोखिमा वस्ती, जीवन मरणको दोसाँधमा वालक ! – ebaglung.com
२०७५ श्रावण ३, बिहीबार २०:५९	Top News, अन्य समाचार, थप समाचार
प्रेम सुनार, गुल्मी, २०७५ साउन ३ । रिडी तम्घास सडक खण्डको रिडी देखि केहि माथी सडक चौडा पार्न प्रदिप कण्ट्रक्सन रुपन्देहीका ठेकेदार कुन्दन भन्ने लोकबहादुर खत्रीकले जस्तो अचेक्ली अन्य ठेकेदारहरुले बिरलै गरे होलान् । दादगिरी शैलीमा गत चार महिना देखि सेना, प्रहरी र प्रशासनलाई समेत अटेरी गर्दै हटलाईन सडक मानिने तानसेन तम्घास सडक खण्डमा दैनिक ६ घण्टा सम्म डोजर चलाएर जनताको आवत जावत गर्न पाउने अधिकार खोस्दै आएका त्यसका ठेकेदारको पछिल्लो अचेक्लीले झन डर लाग्दो घटना घटेको छ । प्रदिप कण्ट्रक्सनको अचेक्लीले कसैको वास उठ्ने भएको हो भने कसैलाई जिवन मृत्युको दोसाँधमा पारेको हो ।
उनका कामदार र साईड ईन्जिनियरहरुले जथाभावी डोचर चलाएर छेउँमा माटो थुपारे पछि अविरल वर्षाले त्यो माटो बगाएर तल रिडीका वासीन्दाको घर , गोठ शौचालय पुरेको छ । रिडीका डम्वरबहादुर थापा, प्रमोदजंग श्रेष्ठ र राधिका अधिकारीका परिवारजन वस्ने रिडी माविको हास्टल बाढी बसेर घर भित्रका सारा सामग्रीको क्षति भएको छ ।
असार २४ गते राती वाढी पसेपछि अर्को दिन गुल्मीका सिडियो यदुनाथ पौड्य , यहाँका सुरुक्षा निकायका प्रमुख पुगेका थिए । क्षतिपुर्ति दिलाउन र ति वस्तीको जोखिमको अवस्था बुझ्न पुगेका उनिहरुले क्षति त दिलाउने भए तर एकसेएक ईन्जिनियर र सुरक्षा निकायका विज्ञहरुले त्यस वस्तीलाई खतरामुक्त भनेर आए ।
असार २५ गते सम्म डोजर चलाउने त्यस पछि नचलाउने निर्देशन दिएर फर्किएका सिडियोले उनलाई नटेरेर हो, वा भनसुन आएर हो । असार ३१ गते सम्म डोजर चलाईदै थियो ।
भोलीको साउने सक्रान्ति मान्ने चहल पहल घरमा सुरु भई रहँदा विहान अवेर ८ वजेतिर उठेर पिसाप फेर्न शौचालय छिरेका थिए राधिका अधिकारीका १३ वर्षिय छोरा कृर्तार्थ अधिकारीलाई गर्लम्गुलुम ढलेको शौचालयले पु¥यो ।
आमा.. भनेर अर्को पटक चिच्चाए , फेरी आमाले बावु… भनेर चिच्चाईन । एक पटक हजुर.. भने त्यसपछि उनको वोली बन्द भयो । तत्काल रिडीमा प्रथामिक उपचार गराई पाल्पा मिशन अस्पतालले त्यहाँ उपचार सम्भव नभएको भने पछि पाल्पाकै प्रभावस अस्पतालमा पुराईयो । लुम्विनी मेडिकल कलेज प्रभासमा उनि आईसियु कक्षमा जिवन मरणको दोसाँधमा छन । उनको सिटीस्क्यान रिपोर्टमा टाउकोको हड्डी फुटेर ब्रेनमा असर परेको डाक्टरले बताएका छन । तत्काल अप्रेशन गराईए पनि अहिले सम्म उनि अचेत छन ।
किर्ताथका वावु कुमार अभिकारी धन कमाउने सपना बोकेर कतार उडेका थिए । कतार पुगेर झोला कपडा मिलाउन नपाउँदै छोरा पुरिएको खवर पाए । कस्तो दुभाग्य ? ऋण काढेर कमाउन गएका उनि गएको दुई दिन मै घर फर्केका छन ।
भावविहल उनि वोल्न खोज्दा गलाअवरुद्ध पार्छन । लाखौं ऋणको भारी बोकरे त्यहाँ पुगेका उनि आफन्त संग अर्को ऋणको भारी बोकर फर्किनु परेको छ । जापनमा रहेका उनका दाजु भाई पर्ने टिका अधिकारी भन्छन ठेकेदारको चरम लापर्वाही र प्रशासनको समेत हेलचाक्राईले यति पिडादायी लाग्दो घटना घटेको हो ।
त्यहाँको अवस्था गम्भीर लागेर असार २७ गते जिल्ला प्रशासनमा पुगेर यसै समाचारदाले प्रमुख जिल्ला अधिकारीको ध्यानकृष्ट गराएको थियो । उनले २५ गते सम्म चलाउन भनेको त्यस पछि रोक्न भनेको बताउँदै थिए ।
ति वाढी पिडित परिवारलाई कुल क्षतिको ५० प्रतिशत रकम ठेकेदारबाट ब्यहोर्न लगाएर आएको हुँ , उनले भन्दै थिए २५ गते सम्म त भनियो तर बर्षायामको वेला छ बाटो चाँडै सक्छ भने त एका दुई दिन गरोसकी भन्ने लागेको छ ।’
उक्त सडक निर्माणको रेख देख गर्ने सडक डिभिजन कार्यालय पाल्पालाई पछिल्लो घटनामा परी घाईते भएका वालकको वारेमा थाहै छनै । डिभिजन प्रमुख ईञ्जिनियर वावुराम सापकोटाको ध्यानकृष्ट गराउँदा उनले आफुलाई त्यसबारे थाह नभएको बताए ।
पछिल्लो घटना त मिलाएर आएका हौं, उनले भने पछिल्लो घटनामा वालक घाईते भएको कुरा मलाई जानकारी नै गराईको छैन , ति ठेकेदार र उनका सम्पर्क ब्यक्तिको फोन पटक पटक गर्दा पनि उठाईएको छैन । कति किलो मिटर हो ? कति लागतमा निर्माण हुँदै
छ ? यो प्रश्नको जवाफ भने आफुले अफिस नगए सम्म दिन नसक्ने बताए । त्यस्तै तिन करोडमा बन्दै होल , उनले अनुमानित कुरा सुनाए ।
उनकै शव्दमा तिन करोडको हो भने त्यहाँ स्टुमेटको वोर्ड राख्न पर्ने कि नपर्ने ? ठाउँ ठाउँमा खतराको संकेत पनि गरिनु पर्ने कि नपर्ने ? तलबाट भलले खोलेर ढल्नै लागेको त्यो शौचालय २५ गते नै डोजर लगाएर ढलाई दिन पर्ने कि नपर्ने ? त्यस परिवारलाई प्रयोग नगर्नु हौ भन्न पर्ने कि नपर्ने ? यी गम्भीर प्रश्नको जवाफ अव जनतालाई सरोकारवाला निकायले दिनै पर्छ ।
तस्वीरः आईसियु कक्षमा वालक, परिक्षणको रिपोर्ट प्रहरी प्रशासनले खतरामुक्त भनेको वस्तीको त्यो डर लाग्दो अवस्था